သာအောင်| November 28, 2012 | Hits:1
| | ယခင် ဗဟိုတရားရုံးချုပ် (ယခု ရန်ကုန်တိုင်း တရားရုံးချုပ်) နှင့် ရန်ကုန်တိုင်း စုပေါင်းတရားရုံး နှစ်ခုကို ပုဂ္ဂလိကသို့ လွှဲပြောင်း ရောင်းချမှုကို ရှေ့နေများ ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
အဓိကရုဏ်းတွေ ထပ်ဖြစ်လေမလားမဖြူနှင်းထွေး လွတ်မြောက်ရေး မန္တလေးနှင့် ရန်ကုန်တွင် ဆန္ဒပြ ၀တ်ပြုဆုတောင်းရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ လူမှန်နေရာမှန် ဖြစ်လာနိုင်မလားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၃)ဥပဒေလောကသားတွေ ရှက်တတ်ရဲ့လား
လွင်အောင်စိုး November 28, 2012 - 3:46 pm တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အခြေခံကျကျ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အရေးပါတဲ့ ဆောင်းပါးကောင်း တပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီအရ မဏ္ဍိုင် သုံးရပ်ကို အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းဖို့ Checks and balances ကို မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရတယ် ဆိုပေမယ့် မလုပ်တတ်တာ၊ မလုပ်ချင်တာ၊ လုပ်လို့ မဖြစ်သေးတာ ရောထွေးနေပါတယ်။ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းတယ် ဆိုပြီး မြန်မာမှု ပြုထားတာကိုတောင် နားမလည်ဘဲ ဖြစ်နေသလား တွေးရပါတယ်။ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းရာမှာ မဏ္ဍိုင်တခုက အခြားမဏ္ဍိုင်တခုကို ကူညီတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်တာဝန်နဲ့ကိုယ် ပြတ်ပြတ်သားသား သီးခြားစီ လုပ်ကြရာမှာ အစွန်းထွက်မသွားအောင် ၊ တနည်းအားဖြင့် အာဏာ အလွဲသုံးစား မဖြစ်ရအောင် ထိန်းချုပ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မဏ္ဍိုင်တခုက သူ့အလုပ်ကို အာဏာ အလွဲသုံးစားခြင်း မရှိဘဲ ပုံမှန် လုပ်ဆောင်နေရင် အတင်းဝင်ရောက် သြဇာ လွှမ်းမိုးလို့ မရပါဘူး။
Reply ရာဇာ November 28, 2012 - 7:18 pm မြန်မာပြည် ကတော့ စနစ်ဟောင်းတွေကို ပြုပြင်ဘို့ အချိန်အတော်ယူ ရအုံးမှာပါ…စနစ်တွေ အသစ်ပြောင်း ပေမဲ့ စနစ်ဟောင်းက အကျင့်တွေ မဖျောက်နိုင်ကြသေးဘူး….အရိုးစွဲ နေကြတုံး ရှိသေးတယ်…ဒီလူတွေ အရိုးစွဲပုံများ ဘုန်ကြီးလူထွက် ရည်းစားစာ ရေးသလိုဖြစ်နေကြတယ်…ဘုန်းကြီးလူထွက်က လူထွက်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ မိန်းခလေးတွေ့တော့ ရည်းစားစာ ရေးတာက ဒကာမလေး ကို ဦးဇင်း မေတ္တာရှိနေပါတယ်…ဦးဇင်းကို မေတ္တာဆွမ်းလေး ကပ်နိုင်မလားတဲ့……
Reply Ngal Hriang November 29, 2012 - 12:07 am I love the article so much. Degree in Burma LLB stands for Lawless Burma for too long. The rule of law needs genuine representation in the Hlutdaws. Fake Hlutdaw Members will not bring rule of law in the Union of Burma.
Reply Nyein November 29, 2012 - 2:20 am We agree with you. Excellent !